HAGG WOOD transmitter - Freeview: BBC Digital TV Wrong Region from 09:36 today to 09:40 today, HD Digital TV Wrong Region from 09:37 today to 09:40 today. [BBC]
HAGG WOOD transmitter - Freeview: BBC Digital TV Wrong Region from 09:36 yesterday to 09:40 yesterday, HD Digital TV Wrong Region from 09:37 yesterday to 09:40 yesterday. [BBC]
HAGG WOOD transmitter - Freeview: BBC Digital TV Wrong Region from 09:36 on 23 Nov to 09:40 on 23 Nov, HD Digital TV Wrong Region from 09:37 on 23 Nov to 09:40 on 23 Nov. [BBC]
HAGG WOOD transmitter - Freeview: BBC Digital TV Reduced Quality from 14:25 today to 14:41 today. [BBC]
HAGG WOOD transmitter - Freeview: BBC Digital TV Reduced Quality from 14:25 yesterday to 14:41 yesterday. [BBC]
HAGG WOOD transmitter - Freeview: BBC Digital TV Reduced Quality from 14:25 on 09 Feb to 14:41 on 09 Feb. [BBC]
HAGG WOOD transmitter - Freeview: BBC Digital TV Off Air from 10:32 today to 10:35 today, HD Digital TV Off Air from 10:32 today to 10:35 today. [BBC]
HAGG WOOD transmitter - Freeview: BBC Digital TV Off Air from 10:32 yesterday to 10:35 yesterday, HD Digital TV Off Air from 10:32 yesterday to 10:35 yesterday. [BBC]
HAGG WOOD transmitter - Freeview: BBC Digital TV Off Air from 10:32 on 03 Jul to 10:35 on 03 Jul, HD Digital TV Off Air from 10:32 on 03 Jul to 10:35 on 03 Jul. [BBC]